Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Play Store မှာ Apps များ Auto Update လုပ်နေတာကို ပိတ်နည်း ♫
♪ Play Store မှာ Apps များ Auto Update လုပ်နေတာကို ပိတ်နည်း ♫
Play Store အပါအ၀င် Android App Stores များက သင့် စမတ်ဖုန်းမှာ Install လုပ်ထားတဲ့ Apps များကို Auto Update လုပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်မသိလိုက်ဘဲနဲ့ ဖုန်းဘေလ် ကုန်ကျတဲ့ အဓိက အချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Play Store မှ Apps များ Auto Update လုပ်တာကို ပိတ်ဖို့ နည်းလမ်း ရှိပါတယ်။ မိုဘိုင်းဒေတာ အသုံးပြုနေစဉ်မှာ Update လုပ်တာကို ပိတ်ထားနိုင်ပြီး အခမဲ့ ၀ိုင်ဖိုင် ရရှိချိန်မှ Auto Update လုပ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
၁။ သင့် စမတ်ဖုန်းမှ Play Store ကို ဖွင့်ပါ။
၂။ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထိပ်မှ အလျားလိုက် မျဉ်းကြောင်း သုံးခု ( Menu ) ကို နှိပ်ပါ။
၃။ Settings ထဲကို သွားပါ။
၄။ Auto-update apps ကို တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
၅။ ရွေးချယ်စရာ သုံးခုရှိပါတယ်။ “ Do not auto – update apps “ ကို ရွေးချယ်ရင် Apps များကို Auto-Update လုံးဝ လုပ်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ “ Auto-update apps at any time. Data charges may apply. “ ကို ရွေးချယ်ရင်တော့ Update ရတိုင်း အလိုလို Download လုပ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ Auto-update apps over WiFi only “ ကို ရွေးပေးရင်တော့ ၀ိုင်ဖိုင်ရတာနဲ့ အလိုလို Update လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းဘေလ်ကုန်ကျမှု မရှိစေဖို့ တတိယ တစ်ခုကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
စမတ်ဖုန်း အသုံးပြုသူများ ကိုယ်မသိလိုက်ဘဲ ဖုန်းဘေလ် ကုန်ကျနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်များကို ကြုံဖူးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ App Store များက Apps များကို အလိုလို Update လုပ်ပေးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ App Store များရဲ့ Settings ထဲမှာ Auto-Update ကို ပိတ်ထားသင့်ပြီး ၀ိုင်ဖိုင်ရမှသာ Auto-Update လုပ်တာကို ရွေးပေးသင့်ပါတယ်။ ဖုန်းမှ Contacts, App Data , Browser Bookmarks, Passwords များကိုလည်း သင့် Google အကောင့်နဲ့ Sync လုပ်ခြင်းကလည်း ဖုန်းဘေလ်ကုန်ကျစေတဲ့အတွက် Auto- Sync လုပ်တာကိုလည်း ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ၀ိုင်ဖိုင်ရမှသာ Manual-Sync လုပ်သင့်ပါတယ်။